ကာစီနိုဆုကြေးငွေ 2019 - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဆောင်းပါးများ > ကာစီနိုဆုကြေးငွေ 2019
Megan အောက်တိုဘာလ 27, 2018 ဆောင်းပါးများTagged ဆုငှေ, ဇါတ်ရုံ, လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေa Comment ချန်ထား ကာစီနိုဆုကြေးငွေအပေါ် 2019
ဒါဟာသင်အလောင်းအစားကိုစတင်ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟုစိတ်ချရသနည်း သင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးမျှမစတိုးဆိုင်လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ဆုလာဘ်လိုအပ်သည်။ အလေးပေးရန်အဘယ်သူမျှမဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးသူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအချို့မယုံနိုင်စရာမရှိ, စတိုးဆိုင်ကလပ်နှင့်အတူထက်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအကျိုးတူစတင်အဘယ်အရာပိုကောင်းချဉ်းကပ်? သူတို့ကအလှနျသငျ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်ပျော်စရာတွေအများကြီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်သူတို့ကိုဒါထူးခြားတဲ့စေသည်ဘယ်အရာကိုမြင်သင့်ပါတယ်! အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေကာစီနိုဆုကြေးငွေ
အဘယ်သူမျှမစတိုးဆိုင်အပို codes တွေကိုဘာတွေလဲ?
သူတို့ကသငျသညျအစပိုင်းတွင်ဗြိတိန်၌အခြားသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားကလပ်မှာစံချိန်တင်အောင်အခါသင်ရဆန်းကုသမှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဤရွေ့ကားဆုလာဘ်ဥပမာ, အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာပိုက်ဆံဆုချအခမဲ့ပွေီးမှ, coordinate နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ cashback နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးနှငျ့ညီညှတျလောင်းကစားစတင် client ကိုပူဇော်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။
စည်းကမ်းအဖြစ်ဤအခမဲ့ကြိုဆိုကမ်းလှမ်းမှုသစ်ကိုဗြိတိန်ကစားသမားများအတွက်ဆွဲထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ Clubhouse ထိုနည်းတူသူတို့၏လက်ရှိဖောက်သည်ရံဖန်ရံခါသူတို့ကိုပေးပါ။ တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အခြားအပန်းဖြေ dispatches လျှင်ဥပမာ,, သူတို့ကအဆုံးအခမဲ့ခရက်ဒစ်မပါဘဲပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ဆင်နွှဲရန်လိုအပ်သင့်ပါတယ်။ အခြားသူများကကလပ်ကိုသူတို့မယိမျးယိုအစီအစဉျ၏အဓိကရှုထောင့်အဖြစ်ကသူတို့ကိုပူဇော်လော့။
အဘယ်သူမျှမစတိုးဆိုင် clubhouse ဆုလာဘ်မျိုး
ဒါဟာသင် join အခါသင်ရပိုက်ဆံတိကျတဲ့အတိုင်းအတာ၏ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်သင်သည်ပေါင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို5မှ 50 ထံမှ attributes ပေးနိုငျသညျ။ ကြောင်းအချက်အနေဖြင့်ရှေ့ဆက်ကသင်သည်အလောင်းအစားကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကလောင်းကစားလိုအပ်ချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုပြန်လည်ဆွဲထုတ်ဖို့အဆုံးရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, သငျသညျအဆ 30 မှ 100 အကြားသင်တို့၏အကျိုးငွေအလောင်းအစားရန်ရှိသည်။ ဒါကလာမည့်ပေါ်သို့ထို့နောက်တဦးတည်းစီမံခန့်ခွဲသူနှင့်အတူစတင်နှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။
သငျသညျအရငွေသားပို, အမြင့်လောင်းကစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျဘတ်ဂျက်အန္တရာယ်များမပါဘဲအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်အရာအားလုံးရှိနေသော်လည်းကတည်းကအလေးပေးကြပါဘူး။ ဒါဟာဆုလာဘ်ပိုက်ဆံသင်အွန်လိုင်းနေရာများစက်တွေနဲ့အခြားလောင်းကစားကလပ်ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားတန်ဖိုးထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီအထွက်ရှိသည်အခြားအစီအစဉ်များအကြားတစ်ဦး standout ဖြစ်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြောပါတယ်အဖြစ်အခမဲ့ပွေီးမှသင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်လွှဲကစားရန်သုံးနိုငျကွောငျးကိုအပို adjusts ဖြစ်ကြသည်။ လတ်တလောလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ဖွင့်ဘို့သို့မဟုတ်အရှိဆုံးကောင်းစွာသိကြသူတွေကိုများအတွက် clubhouse ဆုသင်သည်အမျိုးမျိုးသောအခမဲ့ပွေီးမှ, ။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာပူးပေါင်းသင့်တယ်နဲ့အမျိုးမျိုးကိုအခမဲ့ပွေီးမှ, သင်၏စံချိန်မှပါးလိမ့်မည်။ အခုတော့တဖန်တုံ, သင်သည်သင်၏အပန်းဖြေကြားတွင်အခမဲ့ပွေီးမှဆုလာဘ်ရပေမည်။
ဤအဖြစ်သည်ပွေီးမှပဲအဖွင့်စက်တွေအဘို့အဓိပ်ပာကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ အားလုံးလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အသင်းများအတွက်လက်လှမ်းမပါအထူးသဖြင့်အရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ သငျသညျငါးဆယ်သို့မဟုတ်ရှစ်ဆယ်ပွေီးမှဒါမှမဟုတ်အချိန်အချို့ကိုသိသိသာသာပိုပြီးရနိုင်။ သငျသညျအရပိုမိုပွေီးမှ, သင်အနိုင်ရဖို့လိုအပ်ပိုရိုက်ချက်များ။ ကံကောင်းထောက်မစွာသငျသညျအခမဲ့ပွေီးမှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသင့်ရဲ့ဆုလာဘ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
အနည်းငယ်ကလပ်အသစ်ကကစားသမားတစ်ဦးကိုအခမဲ့ကစားဆုလာဘ်ကိုဆက်ကပ်။ ဒီအကသင်နေတဲ့စံချိန်စေတစ်ချိန်ကအတူကစားရန်အခမဲ့ငွေရဖို့ဆိုလို။ က may သကဲ့သို့, အခမဲ့ငွေသားတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အချိန်ခွဲတမ်းအတွင်းမှအသုံးပြုသွားမည်ရမည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ကကြီးမားအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်တက်သွားမပေးပိုနှစ်သက်မယ်လို့သည်အရှိန်အဟုန်ကောက်!
ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, အခြိနျကာလလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အားဖြင့်သတ်မှတ်နှင့်ကနာရီမှ 30 ကနေသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆုလာဘ်နောက်ခံမြေတပြင်လုံးထက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာကလပ်အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သငျသညျတိကျတဲ့ပေါင်းလဒ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုတဦးတည်းကသူတို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဧရိယာ၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျဆုံးရှုံးသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဤအဖြစ်ဝေးပြန်တပတ်သို့မဟုတ်လအဖြစ်အဘို့, ငွေဆုံးရှုံးခဲ့ရသူကစားသမားဖို့လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အားဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဆုလာဘ်ပါပဲ။ သငျသညျတစျနေ့ကသင့်ရဲ့အများဆုံးခစျြ၏အပန်းဖြေရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင်အစောပိုင်းကတပတ်ကနေကံမကောင်း၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက် 10% ရတယ်ကွောငျးတှေ့နိုငျသညျ။ အသံကဘယ်လိုယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သနည်း
ဤအဆုလာဘ် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးရအရေးကြီးသောအရာတွေအကြောင်းကိုသတိရပါ: သူတို့တစ်တွေစတိုးဆိုင်မလိုအပ်ပါဘူး။
အဘယ်သူမျှမစတိုးဆိုင်အပို codes တွေကို
သင့်ရဲ့အများဆုံးခစျြ၏ clubhouse အပန်းဖြေကစားခြင်းမပြုမီသင်တို့၏အကျိုးကုဒ်အသုံးချဖို့အားဖြင့်, သင်ပိုက်ဆံ related အန္တရာယ်များမပါဘဲအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
သင်မည်သို့မျှစတိုးဆိုင်အပို codes တွေကို actuate စျနိုငျသလဲ
အပို codes တွေကို Actuating မဆိုလမ်းအတွက်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာစံချိန်တင်အောင်နှင့်မေတ္တာရပ်ခံအခါဆုလာဘ်ကုဒ်တွေကို embed သငျ့သညျ။ တချို့အွန်လိုင်း clubhouse သည်ဤ codes တွေကိုရဖို့အဆုံးရည်မှန်းချက်နှင့်အတူအားကောင်း client ကိုဆက်သွယ်သူတို့ရဲ့ clients များလိုအပ်သည်။ ကာစီနိုဆုကြေးငွေ
အမှန်စင်စစ်ကသင်ဆုလာဘ်အနေဖြင့်အနိုင်ရသောအရာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်ကူးသည်။ သင်သည်မည်သည့်ဆုလာဘ်ပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်မီ, သငျသညျအခြို့သောလောင်းကစားလိုအပ်ချက်ကျေနပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါပေးချေမှုမဟာဗျူဟာလာမည့်ပေါ်သို့ထို့နောက်တဦးတည်းကလပ်နှင့်အတူစတင်အတက်အကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလိုအပ်ချက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အခါတိုင်းအပေါ်သို့မှီခိုနေရသည်။ ဥပမာ, သငျသညျ 200 နှင့်အတူဆော့ကစားရန်ပေါင်လေနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ 30 ကြိမ်အလောင်းအစားဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, သင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ထိုက်တန် 6000 ပေါင်ဖြစ်သင့်၏။ သင်လိုအပ်ချက်ကျေနပ်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ငွေသားပြန်ဆွဲထုတ်ကြောင့်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်တစ်ဦးအလွအချိန်ရှိသည်နှင့်အချို့သောပိုက်ဆံအနိုင်ရများအတွက်စံပြအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ အောက်ရှိ rundown မှာကြည့်ပါနဲ့သင်သည်မည်သည့်စတိုးဆိုင်မပါဘဲအခမဲ့ဆုလာဘ်ပူဇော်ကြောင်းဗြိတိန် clubhouse ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်လွှဲ Locate, စာရင်းသွင်း, အခမဲ့ဆုလာဘ်ရနှင့်အလောင်းအစားစတင်ဖို့။ သင့်ရဲ့အလေးသာကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့်သင့်တစ်နေ့တာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်!